Chronothermostat: waa maxay, sida ay u shaqeyso iyo faa'iidooyinka isticmaalka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Marka qabowgu xukumo maalmaha jiilaalka, kululaynta waxay qaadan kartaa qayb badan oo ka mid ah biilka korantada oo wey kordhin kartaa. Tani waa markaad isku daydo inaad keydiso intaad awoodo adoo raadinaya nidaam kululeyn wax ku ool ah oo yareynaya kharashyada. Xal lacag noo keydinaya oo faa iidooyin gaar ah ka helaya nidaamyada kale ee kululaynta. Waxay ku saabsan tahay qalabka korontada ku shaqeeya.
Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan faa'iidooyinka uu koronto-dhaliyeyaashu na siinayo iyadoo la tixgelinayo heerkulbeegga guud iyo noocyada kale ee kululaynta, sii wad aqrinta qoraalkan.
1 Waa maxay mashiinka korontada lagu xukumo?
2 Teknolojiyada Chronothermostat
3 Maxay tahay?
4 Heerkulka maalin iyo habeenba
Waa maxay mashiinka korontada lagu xukumo?
Waxa ugu horeeya waa in la ogaado waxa aan ka hadlayno. Dhamaanteen ama dhamaanteen waan ognahay waxa uu yahay heerkulbeeggu, laakiin kiiskan waxaa jira faa iidooyin badan markay timaado adeegsiga. Qalabka korontada ku shaqeeya waa farsamo dhijitaal ah oo aad gacanta ku xakameyn karto tamarta aan u siideyno kuleylka. Waxaan xakameyn karnaa heerka kuleylka aan soo saareyno iyadoo ku xiran hadba sida qabow uu xilligaas yahay.
Chronothermostat wuxuu ku shaqeeyaa gaaska iyo naaftada naaftada labadaba. pellets, taas oo siinaysa kala duwanaansho ballaaran. Faa'iidada ugu weyni waxay tahay inay naga caawinayso inaan xakameyno saacadaha aan haysanno iyo marka aan joogno, aan hagaajino heerkulka aan dooneyno inaan joogno mar walba iyo, sidaas darteed, hagaajinta waxtarka tamarta gurigeenna. Tani waa sida aan wax badan uga badbaadinno kululaynta oo aan wax uga iloobi karno wax ku saabsan biilasha korantada ee foosha xun iyo lama filaan marar badan.
Si ka duwan thermostat-ka guud, aaladdan hal-abuurka leh ayaa ka saxsan oo dhameystiran. Dabcan, inaad ka dhameystirnaato waa wax ay adagtahay in la maareeyo, laakiin waxbarid yar ama a chronothermostat-ka-barnaamij fudud si fiican ayaa loo baran karaa. Waxaa jira laba fikradood oo ay tahay inaan barano marka la isticmaalayo qalabka korontada ku jira. Midka koowaad waa heerkulka aan firfircooneyn iyo tan labaad ee heerkulka raaxada.
Midka koowaad waa in la ogaado heerkulka ugu yar ee gurigu leeyahay inta lagu jiro maalmaha jiilaalka iyada oo aan la tixgelin xaaladaha dibadda. Waa inaan sidoo kale tixgalino nooca dahaarka guriga aan ku leenahay ama haddii aan daaqadaha ka furanno. Jeexitaanka albaabka, daaqadaha ajarka qaarkood ayaa naga dhigi kara kuleylka oo aan dareemo qabow maalmahan. Kahor intaadan meel dhigin korontermostat-ka inuu shaqeeyo, waxaa muhiim ah in si taxaddar leh loola socdo dhinacyadan.
Heerkulka raaxada waa midka ay tahay inuu gurigeena gaaro si loo dareemo raaxo leh iyadoo aan kululeyn. Imisa jeer ayey nagu dhacday inaan galno xarun laga dukaameysto kuleylka ayaa naga dhigay inaan iska siibno dhar. Ama waqtiyada kale, kululaynta guriga ayaa faraha ka baxaysa oo waxaan ku raaxeysaneynaa gacmo gaab bartamaha xilliga qaboobaha. Tani ma aha fikradda. Waxa loo baahan yahay waa in lagu raaxeysto laakiin aan tamar lumin.
Heerkulka ugu fiican ee guriga waa celcelis ahaan 21 darajo. Qiimahan ama ku dhow, tamarta tamarta ayaa ugu badnaan iyo isticmaalka ayaa ugu yar. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku raaxeysan karnaa annaga oo aan u baahnayn inaan dharka iska siibno ama aan wax xoogaa dhaxan ah qabno.
Faa'iidada ay qalabkani na siiso waa in lagu xakameeyo heerkulka baahiyahayaga. Waxay awood u leedahay inay u qaybiso dhammaan tamarta si siman si ay u awoodo inay gaarto dhammaan geesaha guriga oo aan waxba qabow looga harin. Sidaas Waan xakameyn karnaa haddii heerkulku kaco ama hoos u dhaco oo aan u habeynno raaxada ugu badan.
Marar badan waxaan helnaa guryo leh kuleyl inta badan maalinta inbadanna guryahooda ma joogaan. Waxay sidaa u sameeyaan si markay guriga u yimaadaan ay u kululaadaan iyaga oo aan sugin heerkulbeeggu inuu kululiyo guriga oo dhan. Qalabkan kacaanka ah, waxaan ku barnaamijsan karnaa waqtiga maalinta aan dooneyno inuu shito si uu u fiicnaado markaan guriga tagno.
Si looga fogaado xaalada noocan oo kale ah ee kululaynta ay daaran tahay marka gurigu faaruq yahay, waxaa jira aaladda loo yaqaan 'chronothermostat'. Haddii, tusaale ahaan, aan shaqo tagno 8da subaxnimo oo aan ku laabanno 15, waan barnaamij ka dhigi karnaa si, si otomatig ah, u daarto 14da duhurnimo oo u qaybiyo dhammaan kuleylka guriga ku wareegsan. Sidaas ayaynu ku kululaan karnaa marka aan guriga ku soo noqonno annagoo aan kulku kululayn 7 saacadood oo aan qofna guriga joogin.
Sidaan horeyba kuugu sheegay, waa inaad tixgelisaa nooca dahaarka guriga iyo cimilada banaanka. Hadday ka qabow tahay, roob da'ayo ama dabayl xoog badani jirto, way u fududaanaysaa inay guriga ka soo galaan god ama sababta oo ah waxay leedahay dahaadh liita. Xaaladahaas oo kale waxaa fiican in la badbaadiyo inta ugu macquulsan ee kululaynta.
Heerkulka maalin iyo habeenba
Si loo hubiyo in isticmaalkayagu yahay kan ugu yar ee suurtogalka ah, khubaradu waxay kugula talinayaan hoos u dhigida kuleylka illaa iyo heerka 15-17. Xaaladaha noocan ah, waxa ugu badan ee lagula taliyaa waa in la baro barnaamijka korontada ku shaqeeya si uu si otomaatig ah u demo marka ugu badan ee aan sariirta ku jirno oo la huwado. Bustayaasha iyo duvetsyada oo lagu daray kuleylkii hore ee firfircoonaa ee waqtiyada firfircoonaa ayaa in ka badan in ku filan si loo ilaaliyo heerkul raaxo leh iyada oo aan loo haysan kuleylka habeenkii.
Haddii aan dooneyno inaan qubeysano subaxa oo uu aad u qabow yahay, waxaan barnaamij u siin karnaa koronto-dhaliyeha inuu dhaqaajiyo nus saac ka hor ama, haddii uu u arko inay lagama maarmaan tahay, inuu si toos ah u shido marka heerkulka guriga uu hoos uga dhaco meel cayiman. Waxaan ku dhejin karnaa in haddii heerkulku hoos u dhaco 13 darajo si otomaatig ah ayaa loo hawlgeliyaa si loo xakameeyo heerkulka illaa 17 digrii iyo inuu mar kale bakhtiyayo.
Dhammaan faa'iidooyinka barnaamijyadan waxay naga caawin karaan inaan ku kaydinno illaa 15% biilka korantada. Tan waxaan ku darnaa 10% aan keydinayno markii aaladda iskeed u go'do si loo keydiyo tamarta. Wadar ahaan, waxaan ku keydin doonnaa 25% ka yar biilka korantada. Boqolkiiba waa wax la ogaan karo xilliga qaboobaha oo dhan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkaan aad ku ogaan karto sida korontada ku shaqeeya ay u shaqeyso iyo maxay tahay faa'iidooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Dhaqaalaha Guriga » Chronothermostat